Kooxda Jwxo-shiil oo Meherad ka Dhigtay Sawiro Qaxootiga Dhadhaab Laga Qaaday “silent cry” – Rasaasa News
Sawirada qaxootiga si xun uga macaashow, waa ceeb siloon oon sariig loo helaynoo, sad ninkii ka dooniyo kii ku saacidaayaba, saaka qalinka lagu jiid dadkana waan la socodsiin.
Dhibaatooyinka iyo nolol xumada ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya awgeed ayey dadweynaha qurbo joogta ee ka soo jeeda Somalida Ogadeniya, waxay maal gashi ku samaystaan dalka Kenya, sanad walbana waxaa fasax u tagaa kumanaan.
Dalka Kenya oo ah dal ay dimoqraatiyadi ka jirto, ayaan kaliya soo jiidan dadka ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya ee soo wada jiitay guud ahaan dadka Somalida ah.
Dalka Kenya waxaa uu hoy siiyaa boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka soo firdhaday dhibaatooyinka ka jira dalalka dariska la ah dalka Kenya. Dadka qaxootiga ah ee ay Kenya hoyga siiso ayaa waxaa ka mid ah qaxooti ay tiradoodu kor u dhaaftay 90, 000 oo qoys oo ka soo cararay dhibaatooyinka ay ku hayso xukuumada Ethiopia Tigray dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Hadaba, waxaa sanad walba taga dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga qurbo joog ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Dadkan oo ayna jirin wax alaale wax ay ku biiriyaan dadka qaxootiga ah, marka laga reebo qoysaska xigtada u ah oo ay xoogaa shilimaad ah siiyaan.
Waxaa dadka qaxootiga ah ka mid dad aad u badan oo hore u ahaa ciidamada Jabhada ONLF, balse u adkaysan waayey dhibaatooyinka uu jwxo-shiil halganka ku hayey iyo lafahoodaba, isaga oo dabada la galay xukuumada waalan ee Eritrea.
Qurba joogta tagta xeryaha qaxootiga ayaa waxay wataan Kamarado digital ah, waxayna sawiro aan munaasab ahayn ka soo qaadaan dadka dhibaataysan ee cidii kamarad wadataba u haysata in ay wax u qabandoonto.
Hadaba, wiil ka mid ah quro joogta oo aad u da,a yar yaa waxaa uu ka soo duubay xeryaha qaxootiga dad baahan oo u baahan in wax loo qabto. Waxaase tiiraanyo ah in kooxda jwxo-shiil ay si xun uga faa,iidaysatay oo ay u isticmaalayso in ay dhaqaale kaga uruursato qurbo joogta Somalida Ogadeeniya.
Waxay ka dhigaan in sawiradan in ay leedahay kooxda jwxo-shiil, waxayna u muujiyaan dadweynaha in sawiradani ay yihiin hawl ay qabatay kooxda jwxo-shiil, waxaana lagu xardhaa boggaga aan indhaha lahayn ee u adeega kooxda jwxo-shiil.
Waxaanu ku boorinaynaa cidii soo qaaday taswiirta in ay dambi tahay in loo isticmaalo si aan sharci ahayn iyada oo ayna raali ka ahan dadkii laga soo qaaday ama aan looga faa,iidaynaynin. dadweynaha Somalida Ogadeeniyana waxaanu uga digayaa in aan laggaga faa,iidaysan sawiradan sida xun loo isticmaalayo.
Kooxda Khaatumo-xun ee Daba Gorasta Jwxo-shiil, oo Dawliskii u Go,ay